घरपरिवारमा सुख शान्ति र धनदौलतको कमी नहाेस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने सॉझ परेपछि भुलेर पनि यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस् ! – Sapana Sanjal
घरपरिवारमा सुख शान्ति र धनदौलतको कमी नहाेस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने सॉझ परेपछि भुलेर पनि यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस् !
July 5, 2021 161
Sapana Sanjal : घरपरिवारमा सुख शान्ति र धनदौलतको कमी नहाेस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने सॉझ परेपछि भुलेर पनि यी काम कहिल्यै नगर्नुहोस् ! हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार यी ५ काम सूर्यास्तपछि कहिल्यै गर्नु हुँदैन । पौराणिक कथा र ज्योतिष शास्त्रमा कयौँ यस्ता कुराको दावी गरिएको छ जसलाई आजका मानिसपनि मान्ने गर्दछन् । यस्ता कार्य राति गरेमा लक्ष्मी माता रि-साउनु हुन्छ भन्ने मान्यता रहेकाे छ:-
४) राति दूध या खाना ढाकेर राख्नुहोस्:- अर्को मान्यता यो पनि छ कि राति दूध या अन्य खाना जहिल्यै ढाकेर राख्नु पर्दछ । भलै तपाईं खानेकुरा फ्रिजमा राख्नुहुन्छ तर ढाकेरै राख्नुहोला । भनिन्छ खाना खुला राख्दा यसमा रातको नकारात्मक उर्जा प्रवेश गर्दछ । अर्को तर्क यो पनि छ कि कयौँ प्रकारका साना किरा बाहिर आउने र खानामा प्रवेश गर्न सक्दछन् जसले विरामी भइन्छ ।
५) साँझ स्नान गरेपछि निधारमा चन्दन नलगाउनुहोस्:- साँझ यदी तपाईं सूर्यास्तपछि स्नान गर्नुहुन्छ भने निधारमा चन्दन नलगाउनुहोला किनकी चन्दन लगाएर तपाईं राति सुत्नुहुन्छ भने चन्दनको पाप्रा तपाईंको आँखामा खस्न सक्छ र रोशनी गुम्न सक्छ वा आँखामा समस्या आउन सक्छ भन्ने मान्यता छ । केही निधारमा लाउनै परे विभूति लगाउन सक्नुहुन्छ ।
६) सूर्यास्तपछि कपाल नकाट्नुहोस:- यो पनि मान्यता छ कि राति कपाल अर्थात रौँ का-ट्नु हुँदैन किनकी यसो गर्दा तपाईंमा नकारात्मक असर पर्दछ र लक्ष्मी रि-साउन सक्छिन्।
Prevअप हर ण गरे भन्दै फोन गरेकी बहिनि सुजिता भण्डारीको शब ९ दिनपछि जंगलमा यस्तो अबस्थामा भेटियो
Nextवहुउपयोगी गुर्जो कसरी र कति खाने ? यसका वेफाइदा पनि छन् जानी राखौं
श्रीमान बिदेशमा रहेकी २६ वर्षीया महिला पक्राउ, छिमेकीको निगरानीपछी खुल्यो पोल